Sifuna ukuhlinzekwa kwezidingongqangi okungenamfihlo
Usuke wawabona ama-Service Delivery Agreement Kanye (SDA) nama-Municipal Services Partnership Agreements (MSPA) emahhovisini omasipala wakho? Awazi ukuthi ziyini le zinto? Empeleni, kuvele kube ngathi iningi losopolitiki bafuna kube njalo. Phela iMunicipal Sysytems Act ithi ama-SDA Kanye nama MSPA kufanele kube izinto umphakathi okwazi ukufinyelela kozo , ukuze abantu abafana name nawe bakwazi ukwazi ukuthi yiziphi izinkampani, futhi zikhokhelwa kangakanani, eziqashwa umasipala ekuletheni izidingongqangi. Kodwa omasipala eMzansi wonkana aziwulandeli lo mthetho. Lokhu kwenza inkahlakalo yande.
Sinawo amandla okushintsha lokhu. Osopolitiki bakhakasela mavoti ethu futhi bonke bakhuluma ngokulwa nenkohlakalo Kanye nokuthuthukisa ukuhlinzekwa kwezidingongqangi. Kungakho kuyisikhathi esibucayi sokuthi sifune bonke osopolitiki abangenele ukhetho ukuthi baziphophezele ekwenzeni onke ama-SDA Kanye nama-MSPA kube izinto umphakathi okwazi ukufinyelela kuzo.
Uma thina njengabantu baseMzansi sibambisana, sinamandla okwenza labo esibavotelayo baziphendulele.
Bakhankasi bokhetho loMasipala
Thina, abantu baseMzansi, sifuna nizibophezele ukuthi komasipala enibamele nizoletha ukuhlinzeka ngezidingongqangi futhi nenze ukuthi umphakathi ukwazi ukufinyelela ezivumelwaneni omasipala abazenza nezinkampani abaziqashile, phecelezi ama-SDA kanye nama MSPA. Lokhu kuzosiza kakhulu ekuletheni ukuziphendulela kanye nokwenza kube sobala ukusebenza koMasipala. Uma kukhona ukungezwani phakathi koMasipala kanye nemiphakathi, kuba khona imibhikisho bese kuthi umsebenzi kaHulumeni ungabe usabonakala. Kubalulekile ukuthi nisebenzisane nemiphakathi futhi nenze ngenhloso ukuthi niyibandakanye ezinqunyweni ezithinta izimpilo zayo. Lokhu kuyindlela yokuvikela umsebenzi osuwenziwe kuze kube imanje.
Ngaphambi kokuthi babekwe ezikhundleni abaholi abasha bomasipala, asifune kubo ukuthi baziphophezele ekuhlinzekeni ngezidingongqangi ngezindlela ezingenazimfihlo, baphinde basazise njengomphakathi ngezivumelwano ezenziwa omasipala nezinkampani eziqashwa yibo.